बाढीले डुबान र नदिले कटान गर्ने क्षेत्रको निरीक्षण गर्न माडी पुगे प्रचण्ड | PBM News.com
बाढीले डुबान र नदिले कटान गर्ने क्षेत्रको निरीक्षण गर्न माडी पुगे प्रचण्ड
चितवन २७ असार । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा )का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बाढी र डुबानक्षेत्रको तटबन्धनको कामलाई तीब्र बनाउन निर्देशन दिएका छन् । पश्चिम चितवनको नदिकटान क्षेत्रको निरीक्षणपछि उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन। नदिले गर्दै आएको कटान रोक्ने काममा प्रहरी र नेपाली सेनालाई स्थानीयले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट नदि कटान नियन्त्रणका लागि दिर्घकालिन योजना बनाएर अगाडी बढ्ने प्रतिवद्धता समेत जनाए । पश्चिम चितवनको राप्ती र नारायणी नदिले कटान गर्दै आएको क्षेत्रमा नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि नेपाली सेनाले काम गर्दै आएका छन् । भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं. २७ र २८ को सीमाक्षेत्रमा पर्ने निउरे चोक नजिकैको स्पर नारायणी नदिले बगाएपछि अध्यक्ष दाहालले सो क्षेत्रको निरीक्षण गरेका हुन । पाँचवटा स्परमध्ये शुक्रवार एउटा स्पर नदिले बगाएको छ ।
पश्चिम चितवनको हाल भरतपुर महानगर क्षेत्रका वडा नं. १, ३, ४, १६, १७, १८, २२ र २४ देखि २८ सम्मका वडाहरु डुबान र नदि कटानको उच्च जोखिममा छन् । पश्चिम चितवनको डुबान र कटान क्षेत्रको निरीक्षणपछि अध्यक्ष दाहाल माडी पुगेका छन् । माडी क्षेत्रका बाढी प्रभावित र डुवान क्षेत्रको निरीक्षण गर्नेछन् । आर्थिक वर्षको असार मसान्त लागेसँगै अध्यक्ष दाहालले आफुले तय गरेका योजनाहरुको कामकार्वाहीको बारेमा जानकारी समेत लिनेछन् । माडीका जनप्रतिनिधिहरुसँग छलफल सँगै माडी स्थित आफ्ना पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुसँग पनि छुट्टै भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ ।
वीर र समिताको रोमान्स-भिडियो सहित
भोटेकोशीमा बाढीको जोखिम बढ्यो, चीनले गर्यो सतर्कता अपनाउन आग्रह
गोरखा अस्पतालमा मृत्यु भएकी महिलामा कोरोना संक्रमण रहेको पुष्टि